Home » Vietnes atjauninājumi un ziņas
09.05.2020 Category: Vietnes atjauninājumi un ziņas
Kulo myalezo sizobheka ngokucophelela ama-konglomerāts amakhulu athatha izinkampani eziningi zokubamba iminyaka embalwa edlule – i-Endurance International Group – i-EIG.
I-EIG, eyake yaziwa njengeBizLand, mhlawumbe ingumdlali omkhulu kakhulu embonini yanamuhla yokubamba iwebhu. Le nkampani yaqala ukusungulwa njengenkampani yokubamba iwebhu ngo-1996 futhi iyi-HQ eBurblington, Massachusetts. Ngo-2011, i-EIG yatholakala ngabakwa-Accel-KKR kanye nabakwaGS Capital Partners ngenani elingaveziwe.
Namuhla, inkampani kufakwe kuhlu ku-NASDAQ futhi zenani lama- $ 686.7 wezigidi (ukuhweba ngama – $ 3.51 – $ 7.74 kumaviki angama-52 adlule).
Kodwa-ke, ukubheka okwenkampani Umphumela wamuva wezezimali, inkampani ingenisa imali activma- $ 277.2 wezigidi ngokulahleka okuphelele kwezigidi eziyi-12.3 zamaRandi ngonyaka Wezimali we-2019.
Bonke ababhalisile epulatifomu ye-EIG ngoDisemba 31, 2019, babeyizigidi ezingama-4.766; kuqhathaniswa nababhalisile abacishe babe yizigidi ezingama-5.217 2017. gada 30. jūnijs kanye nezigidi ezingama-5.011
ababhalisile ngo – 31. marts, i-2018.
Isifinyezo se-Endurance International Group Holdings, intego yokwabelana ye-Inc ngonyaka owodwa edlule (ngoFebhuwari 2020).
I-Endurance International Group – noma i-EIG yama-short – izambulela ngaphezu kwezinkampani ze-60, eziningi zazo ezinkampanini zokubamba iwebhu.
I-Orange encane – 2012. gads
Arvixe – 2014. gads
I-Berry informācijas sistēmu uzņēmums
Bluehost – 2011. gads
I-Directi – 2014. gads
HostGator – 2012. gads
I-Hostnine – 2012. gads
HostMonster – 2011. gads
iPage – 2009. gads
IX tīmekļa mitināšana – 2015. gads
I-JustHost – 2011. gads
I-Networks tīmekļa mitināšana
I-SEO tīmekļa vietne Ukusingathwa
Es – dienvidaustrumu Web
I-Webzai – 2014. gads
* Qaphela: Ama-Hipersaite akhomba ukubuyekezwa kwethu kuma-hosting abathintekayo.
Noma kunjalo – unikezwe iqiniso lokuthi ngibambisene nemikhiqizo eminingi yokubamba ngaphansi kolawulo lwayo – ngizokushiya ukuthi unqume.
Njengabo noma cha – kubalulekile ukuqonda ukuthi akuyona yonke imikhiqizo ye-Endurance efanayo.
Yonke into etholakalayo ivela engozini kanye nokungaqiniseki – futhi njengoba abanye bangalindela, ezinye ze-EIG zīmols "zishiywa ukuthi zifile" ngenkathi i-konglomerāts iqhubeka ikhula futhi ithululela izimali kwezinye izindawo.
I-BlueHost, ngokwesibonelo, iqhubeke ukuchuma ngaphansi kokuphathwa kwayo okusha. Inkampani ibuye yathuthukisa amawebhusayithi ayo, yengeza nezinhlu ezintsha zokubamba ezinhlelweni zabo, futhi yahlala njengenye yamagama aphezulu embonini yokusingathwa. Akunakushiwo okufanayo nge-eHost, HostClear, ne-IX Web Ukusingathwa – lezi zinhlobo zemikhiqizo azisekho namuhla futhi abasebenzisi bazo badluliselwe kwamanye amapulatifomu.
Okunye okutholwe yi-EIG akuzange kumenyezelwe / kumenyezelwe kahle. Isibonelo nje singavumela ukuthi uSitelio athengiswe ku-EIG ngemuva kokuthi bavuselele imigomo yabo yesevisi nemininingwane yokukhokhisa.
Uma kwenzeka ukhetha okunye-nansi izinkampani ezimbalwa ezingabanjwanga nge-EIG engiziphakamisayo (chofoza isixhumanisi ukuze ufunde ukubuyekezwa kwami).
Es-Hostingers – Ukukhetha okuphansi futhi okubanzi ezindaweni zeseva.
InMotion Hostings – Ikhaya le-Web Hosting slepenais Eliveziwe!
Starpniekserveris – lēts un elastīgs VPS, kas ir pieejams umhlinzeki.
Contents0.1 IQembu Lamazwe Elizwe, Lani, Lokha Lokukhuthazela Lokukhuthazela (EIG)0.2 Ngamafuphi, ngempela, 아마 쿠루 카쿨
Contents0.1 IQembu Lamazwe Elizwe、Lani、Lokha Lokukhuthazela Lokukhuthazela（EIG）0.2 Ngamafuphi、ngempela、amakhulu kakhulu.1 Izinkampani Zokusingatha kanye Nemikhiqizo ngaphansi kwe-EIG2
Contents0.1 IQembu Lamazwe Elizwe, Lani, Lokha Lokukhuthazela Lokukhuthazela (EIG)0.2 Ngamafuphi, ngempela, Amakhulu kakhulu.1 Izinkampani
Atualizações e Notícias do Site 0